lundi, 03 février 2020 22:18
Herinaratra 100% avy amin’ny masoandro: Hisitraka izany ny tananan’i Fihaonana, Ranohira, Betroka ary Iakora
Hametraka tobim-pamokarana herinaratra zato isan-jato avy amin’ny masoandro, na ilay antsoina hoe « Full solaire », ao amin’ny tanànan’i Fihaonana (5MW), Ranohira (500KW), Betroka (500KW) ary Iakora (150KW) ny vondrona LIDERA miorina atsy Maorisy.
Tontosa, androany 3 febroary, ny fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny JIRAMA sy ny vondrona LIDERA hanombohana ny tetikasa, izay kendrena ho vita ny faran’ity taona 2020 ity.
16 cents dolara (590 Ariary) no hividianan’ny JIRAMA ny herinaratra iray KWH amin’io orinasa vahiny io, hoy ny Tale Jeneraly Andriamanga Vonjy.
lundi, 03 février 2020 21:59
Manakara: Mandray ny asany anaty savorovoro ny Cisco vaovao
Vaovao ny lehiben’ny fari-piadidiam-pampianarana (Cisco) eto Manakara, Faritra Vatovavy Fitovinany. Mitsipaka ny fanendrena io tomponandraikitra vaovao io anefa ny ampahany amin’ny mpiasa ao amin’ny Cisco, ary nametaka sorabaventy nanehoan’izy ireo izany.
Efa tontosa na izany aza ny famindram-pahefana, ary nitsodrano ity sefo Cisco vaovao ity ireo manampahefana sy ray aman-dreny eto an-toerana.
lundi, 03 février 2020 21:43
Fakana an-keriny: Avotra ilay tovolahy 17 taona, dahalo roa maty voatifitry ny Zandary
Nitrangana fakana an-keriny tao Soarano Distrikan’i Sakaraha, androany 3 febroary 2020 tokony tamin'ny 08ora maraina. Tovolahy iray, 17 taona no lasibatry ny jiolahy efatra mitam-basy tamin’io.
Roso tamin’ny fikarohana hanavotana ilay takalonaina avy hatrany ny Zandary avy ao amin'ny Groupement de Sécurité Intérieure (GSI), sy ny Tobi-paritry ny Zandarimaria Sakaraha vao nahazo fanairana.
Nifankatratra tao atsinanan'i Aboka Sakaraha ny andaniny sy ny ankilany tokony tamin'ny 08ora sy sasany. Tsy nanaiky lembenana ireo dahalo ka raikitra ny fifandonana sy fifampitifirana.
lundi, 03 février 2020 21:22
Ifaty-Toliara: Sinoa namely totohondry sy nanambana basy mompera, naratra ity farany
Mampivavaka ao amin’ny paroasy katolika Sanfily – Toliara i mompera Romuald. Nitarika tanora maromaro nitsangatsangana tany Ifaty izy omaly. Teny an-dalana nody no niharan’ny herisetra nataona Sinoa lahy, mbola tanora.
Nitondra fiara i mompera, nandeha fiara hafa ireo tanora niaraka taminy. Nitondra fiara ary nanao ankisisika hisongona ilay Sinoa lahy sady nampaneno klaxon. Nomen’ny mompera lalana izy rehefa nampaneno anjomara fanindroany. Vao avy tafasongona anefa dia najanon’ilay tovolahy Sinoa tampoka ny fiara nentiny. Nivoaka ny fiara izy ary nivatravatra fiteny nanantona an’ny mompera Romuald ary nilaza fa naninona hono izy no tsy homena lalana.
Nanome soja, vary 110 lasaka, menaka 420 litatra, siramamy 15 lasaka ary ronono 960 boaty ny ONG Direct Aid, tolotanana ho fanomanana ny fankalazana ny Andron'ny Vehivavy 8 martsa.
Tonga nanolotra izany teny amin’ny Ministeran’ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsôsialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy etsy Ambohijatovo, androany 3 febroary, i Allaoui Benaissa nisolotena ny ONG, nandray ny fanomezana amin’ny anaran’ny fitondram-panjakana ny Minisitry ny Mponina Naharimamy Lucien Irmah sy ny mpiara-miasa aminy.
Hatao any Toliara ny fankalazana nasionaly ny Andron'ny Vehivavy amin’ity 2020 ity.
L’Amour suffit-il ?
« Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour; mais la plus grande des trois est l'amour. » (Corinthiens 1, 13-13), telle est la devise de l’actuelle administration Rajoelina, sans oublier que dans la Constitution de la 4ème République, Amour a remplacé Liberté, « Fitiavana, Tanindrazana, Fandrosoana », et ce depuis 2010.
A partir de 1958, on a changé 4 fois de Constitution, par 2 fois « Liberté, Patrie, Progrès » (Fahafahana,Tanindrazana, Fandrosoana) a été notre devise durant la 1ère (1958-75) et la 3ème République (1992-2010), « Patrie, Révolution, Liberté »(Tanindrazana,Tolom-piavotana, Fahafahana) pour la 2nde République (République démocratique de Madagascar) de 1975-1992, et nous voilà dans l’ère de l’Amour depuis 10 ans ! Mais qu’avaient apporté toutes ces « ballades constitutionnelles » ?
lundi, 03 février 2020 19:13
Maroantsetra: Lakam-by rendrika, olona efatra tsy hita popoka
Rendrika teo anelanelan’ny vinanin’Ankandimbazaha sy Antsiranan’i Seta, ny harivan’ny alahady 2 febroary 2020, ny lakam-by misy motera iray nitondra olona enina avy any Ambatofotsy, Kaominina Ambinanitelo hiazo an’i Maroantsetra.
Avotra ny roa tamin’ireo olona enina tao anatiny, tsy hita popoka hatramin’izao ny efatra, ka vehivavy ny roa, ary mpitondra lakana ny roa.
Mifarimbona manao fikarohana ny rehetra na olom-panjakana, mpandraharaha sy ny fokonolona. Efa tafakatra an-tanety ny tolakandro teo ilay lakam-by sy ny sasany tamin’ireo entana nentiny. Mbola mitohy kosa ny fikarohana ireo olona efatra.
Nanatanteraka fambolen-kazo teny Tampoketsa ny fianakaviamben’ny mpiasan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC) ny 1 febroary 2020, notarihin’ny filohany, Jean Eric Rakotoarisoa.
Zanakazo 1500 fototra no voavoly tamin’io, izay hazo zanatany ny ankamaroany toy ny ananambo, pamba, mantali, kily, bonara, mahabibo, hazoala, « cannelle », acacia, ylang-ylang ary voandelaka ho fandraisana anjaran’ny HCC amin’ny fandrakofana ala sy famerenana ho maitso indray an’i Madagasikara.
lundi, 03 février 2020 18:18
lundi, 03 février 2020 11:08
Besalampy: Rendrika niaraka amin'ny botry "Fanomezantsoa" ny solika 45 barika an'ny Jirama
Rendrika tany akaikin'i Ampongobe, Fokontany Anosimboalavo, Distrikan'i Besalampy, ny 1 febroary, ny botry "Fanomezantsoa" izay nitatitra ny solika ho an'ny Jirama Besalampy.
Solika miisa 45 barika sy kojakoja fanamboarana trano, fanitso, menaka sakafo anaty daba (bidon) 20 litatra, moto ary fitaovana samihafa no nentin'ilay botry no izao dobo an-dranomasina izao.
Avotra ireo olona 09 nanamory azy, novonjen'ireo sambokelin'ny mpanarato tany fa ny botry kosa natelin'ny ranomasina miaraka amin'ireo entana nentiny.
Mandeha ny fikarohana ilay botry ifarimbonan'ny Jirama, Zandary, misy koa tolotanana avy amin'ny orinasa NACB-AQUALMA amin'ny fitadiavana ireo soliky ny orinasa Jirama izay efa sahirana mafy amin'ny famatsiana herinaratra.
Mankahery ny tomponandraikitra rehetra.